Android संस्करणहरू: समाचार, अपडेटहरू, बगहरू र अधिक | Androidsis
हामी सबैलाई थाहा छ कि त्यहाँ अनन्त छन् अपरेटिव सिस्टिम्स, त्यो सफ्टवेयर यसले हामीलाई कुनै समस्या बिना कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरण काम गर्न मद्दत गर्दछ। हामी विन्डोज जस्ता धेरै विशिष्टहरू भेट्टाउन सक्छौं, तर त्यहाँ अरू पनि छन् जुन कहिलेकाँही ध्यान नखोल्ने हुन्छन्, जस्तो कि अहिलेसम्म देखा पर्दछ। Android। यस ठाउँमा तपाईले सबै भन्दा हालको अपरेटिंग प्रणाली, सल्लाह, सूचना र उनीहरूसँग के गर्नु पर्ने सबै सम्बन्धित फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
हरेक वर्ष, एन्ड्रोइडले धेरै नयाँ सुविधाहरू र सुधारहरूको साथ नयाँ संस्करण रिलिज गर्दछ। हामी तपाइँलाई एन्ड्रोइडको भर्खरको संस्करणहरू, अद्यावधिकहरू र आगामी रिलीजहरूको अफवाहहरूको बारेमा बताउँदछौं।
२०१ 2018 मा, बजारमा एन्ड्रोइडको सुरुवात भएको १० बर्ष भयो। गुगलको अपरेटि system प्रणालीको बर्षहरूमा उल्लेखनीय विकास भएको छ। अधिक र अधिक उत्पादकहरूले यस अपरेटि system प्रणालीको प्रयोग गर्छन्, विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिएको, र वर्षौंमा विभिन्न संस्करणहरू जारी भइसकेका छन।
एन्ड्रोइडको प्रत्येक नयाँ संस्करणको साथ, नयाँ सुविधाहरू र प्रमुख सुधारहरू अपरेटिंग प्रणालीमा आएका छन्। अब हामी यी संस्करणहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं, ताकि तपाईले विकासको बारेमा स्पष्ट विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन यो बर्षको बर्षमा भएको थियो।
एन्ड्रोइड पाई .1.0 .०
अपरेटिंग प्रणालीको पहिलो संस्करण आधिकारिक रूपमा सेप्टेम्बर २ 23, २०० 2008 मा सुरू गरिएको थियो। यसको प्रयोग गर्ने पहिलो फोन एचटीसी ड्रीम थियो। अपरेटिंग प्रणाली उत्तम थिएन, तर तपाईले यो समयको साथ के हुन सक्छ भन्ने झलक देख्न सक्नुहुनेछ।
केहि कार्यहरू पहिले नै प्रस्तुत गरिसकेका थिए जुन आज पनि उपस्थित छन्, जस्तै जीमेलको साथ समिकरण, गुगल अनुप्रयोगहरू जस्तै नक्सा, क्यालेन्डर, सम्पर्क, यूट्यूब वा ब्राउजरमा गुगल खोजी इन्जिन। एन्ड्रोइड मार्केट (गुगल प्ले स्टोरको प्रारम्भिक संस्करण) पनि प्रयोगकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो। जे होस् पहिलो महिनामा तपाईले अनुप्रयोगहरू किन्न सक्नुहुन्न।
२०० out भरमा धेरै थप संस्करणहरू रिलिज भए, केरा रोटी १.१, कप केक १. 2009 र डोनट १.1.1। यो मध्यवर्ती संस्करणहरूको श्रृंखला हो जहाँ एन्ड्रोइड इन्टरफेसमा केहि सुधारहरू बाहेक नयाँ प्रकार्यहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। ठूलो महत्त्व एन्ड्रोइड १.1.5 डोनट थियो, जसले आम जनतामा यसको आगमनलाई चिह्न लगायो। HTC जादू त्यो चरणमा क्विन्सटेन्शिअल फोन थियो।
एन्ड्रोइड २.० / २.१ एक्लेयर
अक्टुबर २,, २००, मा, अपरेटिंग प्रणालीको दोस्रो संस्करण आधिकारिक रूपमा आयो। यसको साथ धेरै समाचारहरू आएका थिए, ती मध्ये धेरै अझै पनि आज उपस्थित छन्। गुगल नक्शामा नेभिगेसन प्रस्तुत गरिएको थियो, ब्राउजर पूर्ण रूपमा सुधारिएको थियो, र होम स्क्रिन अब अनुकूलन गरिएको थियो।
गुगल नक्शामा नेभिगेसनको परिचय एन्ड्रोइडको लागि एक मुख्य तत्व थियो। स्मार्टफोनले पनि उपकरण बनायो जुन प्रयोगकर्ताहरूले आफैलाई अभिमुख गर्न वा मार्गहरू योजना गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्। प्रयोगकर्ताहरूको लागि एक प्रमुख समारोह। फोन मध्ये एक प्रणालीको यस संस्करणको प्रयोग गर्‍यो गैलेक्सी एस को कोरियाली ब्राण्ड को वर्तमान उच्च अंत को पहिलो पुस्ता थियो।
एन्ड्रोइड 2.2 Froyo
केही महिना पछि, २० मे, २०१० मा फ्रुयो आइपुगे। यस अर्थमा, तपाईं नयाँ कार्यहरू र डिजाइनमा परिवर्तनको साथ अपरेटिंग प्रणाली सुधार गर्न गुगलको स्थिर कार्य देख्न सक्नुहुनेछ। यो संस्करण ती मध्ये एक थियो जसले एक ठूलो श्रोता र लाखौं उपभोक्ताहरूको लागि एन्ड्रोइडको साथ पहिलो सम्पर्कमा पुगेको थियो।
Dalvik कम्पाइलर, आवाज आदेशहरू वा एडोबल फ्ल्यास अनुकूलता मुख्य परिवर्तनहरू हुन् जुन अपरेटिंग प्रणालीको यो नयाँ संस्करणले हामीलाई छोडिदियो। प्रणालीको यस संस्करणको साथ, HTC डिजायर पनि बजारमा आयो। एक फोन जसले उपभोक्ताहरू बीच अत्यधिक लोकप्रियताको आनन्द उठायो।
Android 2.3 जिन्जरब्रेड
२०१० को अन्त्यमा हामीसँग मार्केटमा एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण थियो। यदि अघिल्लो व्यक्तिले बजारमा उनीहरूको प्रगतिमा पहिलै राम्रो कदमहरू चालेको थियो भने, यो सम्भवतः यो संस्करण हो जुन उनीहरूको निश्चित विस्तार थियो। यो प्रणाली को सबै भन्दा परिष्कृत संस्करण थियो। दुबै डिजाइन र कार्य को मामला मा।
यसमा, सेन्सरहरूको लागि समर्थन जस्तै gyroscop वा ब्यारोमिटर पहिलो पटक समावेशीकरण गरिएको थियो। थप रूपमा, धेरै फोनहरूको लागि यो उनीहरूले प्राप्त गरेको अन्तिम संस्करण थियो, किनभने गुगलले समर्थन प्रदान गर्न रोक्न शुरू गर्यो। यो महत्त्वपूर्ण पनि थियो किनकि यससँगै पहिलो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट बजारमा आयो।
एन्ड्रोइड H.० हनीकम्ब
मार्च २०११, अघिल्लो संस्करणको केवल तीन महिना पछि, हामीसँग एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण तयार छ। यो कुनै पनि संस्करण मात्र होईन, किनकि यो ट्याब्लेट बूमको बिच मार्केटमा आएको थियो। यस कारणका लागि, अपरेटिंग प्रणालीको एक संस्करण विकसित भयो जुन ट्याब्लेटसँग पनि उपयुक्त थियो।
वास्तवमा, यो संस्करण tablets.० ट्याबलेटका साथ विशेष रूपले उपयुक्त छ। यो मार्केट सेगमेन्टमा गुगलको प्रविष्टि अंकित गरियो। यो एक ठूलो स्क्रिनमा नयाँ कार्यहरू र विजेटहरूको साथसाथै बिभिन्न मल्टिटास्किंग मोडको साथ प्रयोग गर्नको लागि डिजाइन गरिएको संस्करण हो। यो बजारमा विस्तारको समय थियो, जसमा धेरै ब्रान्डले मोडेलको साथ जोखिम उठाए।
एन्ड्रोइड 4.0 आइस क्रीम स्यान्डविच
धेरै महिना पछि, २०११ को अन्त्यमा, विशेष गरी अक्टुबर १२, २०११, अपरेटिंग सिस्टमको संस्करण launched.० सुरूवात भयो। एन्ड्रोइड को संस्करण सबै कुरा एकजुट गर्न बोलाइएको छ। किनकि यो दुबै फोन र ट्याब्लेटहरूमा उपलब्ध गराइएको थियो। यसले अपरेटिंग प्रणालीको लागि नयाँ युगको सुरुवातलाई चिन्ह लगायो।
दृष्टिगत रूपमा यो Google को लागी एक ठूलो परिवर्तन थियो। लक स्क्रिन विजेटहरूको प्रयोग, अन-स्क्रिन बटनहरू, र इसाराका साथ सूचनाहरू खाली गर्ने क्षमता जस्ता सुविधाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले मार्केटमा आधिकारिक रूपमा एन्ड्रोइड बीमको आगमनलाई चिन्ह लगायो। मोटोरोला यो समयमा अग्रणी ब्रान्डहरू मध्ये एक थियो, मोटो RAZR जस्ता मोडेलहरूको साथ।
एन्ड्रोइड 4.1 जेली बीन
जून २०१२ मा रिलिज गरिएको अपरेटिंग प्रणालीको अर्को संस्करण, अहिले सम्मको सबैभन्दा लोकप्रिय थियो। विश्वव्यापी बजारमा सबैभन्दा बढी उपस्थिति रहेको कम्पनीहरूमध्ये एक हुनुको अलावा। प्रयोगकर्ता अनुभव महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भयो, किनकि प्रणालीले अब अधिक तरलताको रूपमा प्रतिक्रिया देखायो। प्रयोग धेरै राम्रो थियो।
भ्वाईस कमाण्डहरू र गुगल नाउको आगमन एन्ड्रोइड जेली बीनमा ठूलो महत्त्वका दुई पक्षहरू थिए। सूचनाहरू सुधार गरियो र प्रोजेक्टर बटर पनि आइपुगे, जुन प्रणालीमा ठूलो महत्व थियो। सोनी एक्सपेरिया जेड यस समयमा प्रमुख थियो। यसको १ MP MP क्यामेरा र वाटरप्रूफ हुनु भएकोमा धन्यवाद, यस सम्बन्धमा पहिलो एन्ड्रोइड फोनहरू मध्ये एक।
एन्ड्रोइड 4.4 KitKat
एन्ड्रोइड 4.4.। किटक्याट एक संस्करण हो जुन आज पनि धेरै प्रयोगकर्ताहरूले माया गर्दछ। यसले आज अपरेटि। प्रणाली के हो भन्ने आधारशिला राख्यो। गुगलले धेरै प्रविधिहरू समावेश गर्‍यो, जुन आज पनि अपरेटि operating प्रणालीमा अवस्थित छन्। थप रूपमा, यसले Ok गुगल आदेशको आगमन चिह्नित गर्‍यो।
डिजाइन यसको विकासको साथ जारी रह्यो, केही सफा र ईन्टरफेस प्रयोग गर्न अधिक सहजको साथ। थप रूपमा, सुधारहरू गरियो ताकि कम-एन्ड फोनहरू सबै समयमा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ। स्क्रिन रेकर्डिंग पनि उपकरणहरूमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
नोभेम्बर २०१ 2014 मा सुरू गरिएको, यो यी संस्करणहरू मध्ये एक हो जुन एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूमा विशेष उत्साह पैदा गर्दछ। यो आश्चर्यजनक कुरा होइन, किनभने यो ती मध्ये एक हो जसले हामीलाई ठूलो परिवर्तनको साथ छोडिदियो। सामग्री डिजाइन अपरेटिंग प्रणाली को यो संस्करण संग आफ्नो प्रवेश बनायो। यो पहिलो ठूलो परिवर्तन थियो जुन उनले हामीलाई छोडे।
यसको मतलब नयाँ-64-बिट प्रोसेसरको आगमन पनि हो किनभने Android ले अब उनीहरूलाई समर्थन गर्दछ। मल्टिस्क्रिन समर्थन पनि प्रस्तुत गरिएको थियो, स्मार्टलकले अपरेटिंग प्रणालीमा पुग्यो र अन्तमा, प्रोजेक्ट वोल्टा आइपुगे।
अक्टोबर २०१ 2015 मा, एन्ड्रोइडको छैठौं संस्करण बजारमा पहिले नै थियो। एक अविरल संस्करण, जसमा यो स्पष्ट थियो कि गुगलले पहिले नै अपरेटिंग प्रणालीको साथ उनीहरूले के हासिल गर्न चाहेको बारेमा स्पष्ट विचार राखेका थिए। तर यसमा महत्वपूर्ण सुधारहरू ल्याउने प्रवृत्तिलाई कायम राख्दै।
यस संस्करणमा, Android मा पहिले नै अवस्थित रहेको सुधार गर्ने निर्णय गरियो। त्यहाँ कुनै प्रमुख परिवर्तनहरू थिएनन्, तर त्यहाँ सुधारहरू थिए, जसले राम्रो प्रदर्शन दिने उद्देश्यले आएका थिए। ब्याट्री व्यवस्थापन सुधार गरिएको थियो, अनुप्रयोग अनुमतिहरू अब व्यवस्थापन योग्य थिए, र अनुकूलन भण्डारण यहाँ थियो। यसले एसडी कार्डलाई एन्ड्रोइड फोनमा फिर्ता पनि ल्यायो। गुगल नाउले पनि ट्यापमा प्रस्तुत गर्‍यो, जसले आज कुनै किसिमको गुगल सहयोगीको जग निर्माण गर्‍यो।
एउटा भर्खरको संस्करण, जुन भर्खरका महिनाहरूमा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग भएको थियो। गुगल पिक्सलको प्रक्षेपणले यसको आगमन लगभग ओभर शेड छ। भ्वाइस खोजीहरू यस एन्ड्रोइडको संस्करणको साँचोहरू हुन्। द्रुत भाषा सेटिंग्स। यद्यपि धेरैले धेरै प्रत्याशित प्रकार्य बहु-विन्डो थियो। Nougat संग पहिले नै आइसकेको कुरा।
अघिल्लो संस्करण जस्तै, गुगल अपरेटिंग प्रणालीमा उपस्थित धेरै पक्ष सुधार गर्न जारी गर्न प्रतिबद्ध थियो। यसको प्रगति बजारमा केही सुस्त थियो, तर यो एक संस्करणको रूपमा ताजको रूपमा परिचित छ जुन सुधारहरू र राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभवको साथ छोडियो।
अगस्ट २०१ 2017 मा रिलिज गरिएको, एन्ड्रोइडको यो संस्करण अझै धेरै चलाखीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। गुगल सहायक एन्ड्रोइड मा समेकित गरिएको थियो, यो स्पष्ट पार्दै कि यो अमेरिकी कम्पनीको रणनीतिमा पहिले नै एक महत्त्वपूर्ण तत्व थियो। बाँकीको लागि, प्रणालीमा साना सुधारहरू आउँदै थिए।
स्वत: समाप्तिमा सुधार, पिक्चर-इन-पिक्चर मोडको परिचय। तत्काल अनुप्रयोगको अतिरिक्त, जुन तपाईं तिनीहरूलाई स्थापित नगरीकन प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, जुन खेलहरू मार्फत पनि सम्भव छ। गुगल पिक्सेलको दोस्रो जेनरेशनको साथ आएको संस्करण। पिक्सेल २ एक्सएल निस्सन्देह एन्ड्रोइडमा जारी गरिएको सबैभन्दा पूर्ण र उच्च गुणवत्ताको मोडेलमध्ये एक हो।
अहिलेसम्मको अपरेटि system प्रणालीको सबैभन्दा भर्खरको संस्करण, अगस्त २०१ released मा जारी भयो। एक संस्करण जसमा कृत्रिम बुद्धिमता एन्ड्रोइडमा रहनको लागि यहाँ छ। यो उद्देश्य हो कि प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ तरिकामा अपरेटिंग प्रणाली प्रयोग गर्छन्। इशाराहरूमा प्रतिबिम्बित केहि चीज।
सुधार ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न पनि गरिएको छ, अनुकूलन चमक। थप रूपमा हामी यो पनि देख्दछौं कि फोनमा निचत कसरी साझा तत्व भएको छ। प्रणाली र अनुप्रयोगहरूलाई एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा यो नयाँ डिजाइन अनुकूलित गर्न बल गर्दछ।
कसरी VirtualBox मा एन्ड्रोइड स्थापना गर्न र एक पीसी मा एन्ड्रोइड को आनन्द लिनुहोस्
द्वारा इग्नासियो साला बनाउँछ 10 महिना .
एक पीसी मा एन्ड्रोइड रमाईलो गर्न को लागी सबैभन्दा राम्रो तरीका BlueStacks जस्तै emulators को उपयोग गरेर होईन, तर ...
एन्ड्रोइड को नयाँ संस्करणहरु अपनाउने दर सुधार गरीरहेको छ
एन्ड्रोइड सँधै विखण्डन द्वारा विशेषता गरिएको छ, प्राय: निर्माणकर्ताहरूको उपेक्षाको कारणले गर्दा ...
यदि तपाईंको फोन एन्ड्रोइड .7.1.१ द्वारा व्यवस्थित गरिएको छ भने तपाईंले त्यसलाई २०२१ हो वा हो परिवर्तन गर्नुपर्नेछ
एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले सामना गर्ने समस्याहरू मध्ये एक विखंडन हो, यो समस्या थोरै ...
सेप्टेम्बरको सुरूमा, Google ले Android ११ को अन्तिम संस्करण जारी गर्‍यो, बिस्तारै बिस्तारै आइरहेको एक संस्करण ...
एन्ड्रोइड ११ यहाँ छ र यसको ११ सबैभन्दा ठूलो समाचार छ
एन्ड्रोइड ११ विकासकर्ता पूर्वावलोकनहरूको साथ विकासको ती महिना पछि यहाँ छ र हामी के गयौं ...
शाओमीले आफ्ना आधिकारिक फोरमहरू फोनहरू साझेदारी गर्यो जुन एन्ड्रोइड ११ बाट अपडेट हुनेछ ...
प्रत्येक मोबाइल अपरेटिंग सिस्टमसँग भिन्न अनुकूलन विकल्पहरू छन्, एन्ड्रोइडको साथ एक पहिरोले जित्यो। एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताको रूपमा ...
गुगलले एन्ड्रोइड ११ को बिटा रिलिज गर्न सुरु गरेको छ र उपकरणहरूको कन्फिगरेशन गाइडमा खुलासा हुन्छ ...
के तपाईं गुगल बिना नै Android को कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? Eelo यो साँचो हुन सक्छ
OnePlus5अस्थायी रूपमा Android Oreo को अपडेट प्राप्त गर्दैन
Android .8.1.१ सुविधाहरू। Oreo प्रयोगकर्ता द्वारा कम ज्ञात
एन्ड्रोइड ओरियोमा अपडेट हुने स्यामसंग फोनहरूको पूर्ण सूची
Android Wear २.2.6: नयाँ अपडेटमा आएको समाचारहरू
Android .8.1.१ ओरेओ यो आधिकारिक हो! | हामी तपाईंलाई यसको सबै समाचारहरू देखाउछौं
एन्ड्रोइड .7.1.1.१.१ नौगट सामसु J J5 (२०१ 2016) मा आउँदैछ